Mialà , miesora , raondriana mpihambo tsy tompony , fa aza misosososo foana
toa vinanto kely tsy mandre fosa ; fa hianao dia tsy mba kivy , ary tsy mba ketraka
hoatry ny mitari - bady tsy lasam - bodiondry , sy ny homan - kena tsy lasam ...
Tiako tahaky ny vary hianao - Tsy tianao aho izany Fa ataonao famonjy fo raha
noana — Tianao tahaky ny inona ange aho ? — Tiako tahaky ny rano hianao ? -
Tsy tianao aho izany Fa ataonao fitia momba tseroka – Tianao tahaky ny inona ...
Asa iny , fa tsy nahatrata ahy . Nahoana hianao no dia mijoro ? Tsy mijoro aho ,
fa sendra mitsangana . Nahoana hianao no dia misento ? Tsy misento aho , fa
manoaka . Nahoana hianao no toa veri - saina ? Tsy veri - saina aho , fa